I-Whitepaper: Ukuzenzekelayo ukujonga ukuZenzekelayo kuyonyusa amaxabiso okuGuqulwa | Martech Zone
Iphepha elimhlophe: Indlela yokuZenzekelayo yokuLumkisa inyusa amaxabiso okuGuqulwa
NgeCawa, ngo-Novemba 24, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Isanda kulayishwa eyethu Ithala leencwadi elimhlophe (Ixhaswa ngu Iphepha lokwabelana) lupapasho olwenzelwe lwaphuhliselwa Intengiso yeyethu Nkonzo. Iphepha elimhlophe libizwa ngokuba, Kutheni ufuna inkqubo yokuThenga ukuThengisa.
Intengiso ijolisa ingqalelo yabo kwi emazantsi efaneli yentengiso. Kwiinkampani ezinenkqubo ephumayo yokuthengisa, kulapho kukhokelwa khona ukuba abasebenzi babo bathengise balandele.
Ingxaki eboniswe yiSalesvue kukuba uninzi lwamashishini lushiya itoni yemali etafileni ngezizathu ezimbalwa:
Amaqela okuthengisa awana inkqubo yokujonga izinto ezizenzekelayo oko kubenza ukuba bavelise umsebenzi owoneleyo kwithemba abanalo.
Amaqela okuthengisa ahlala enemithetho engekho ngqiqweni ebayekisayo ukubiza ithemba kwangethuba kakhulu.
Amaqela abathengisi bahlala beyeka ukubiza elona thuba linenzuzo nelona likhulu lesivumelwano Ngokuyeka ukunxibelelana namathemba aphambili.
I-Salesvue ifumanise ukuba abathengi banokunyusa imisebenzi ngama-50% kunye nokuguqulwa ubuncinci be-20% xa ukujonga ubuchwephesha kusetyenziswa ngamaqela okuthengisa. Nantsi indlela amanani ajongeka ngayo:
tags: Ukucingelaukujonga izinto ezizenzekelayointengisoWhitepaper
Yonke iMarike yokuThengisa ukuba iiSizzles ayisiyoSpam
Uyenza njani iMibono yoMxholo kuMthengi omtsha
Umzi mveliso wam
Nov 27, 2013 kwi-2: 20 AM
Enkosi ngokwabelana ngale posi nathi, iluncedo kum. Nceda ugcine ukwabelana ngezi ntlobo zolwazi, kwaye kuyacaca ukuba, enkosi kumzamo wakho!